परिवार जनको रक्षाको लागि देख्ने बितिकै ॐ लेखी सेयर गर्नुहोस! – Sandesh munch
बुधबार ०७ माघ २०७७
परिवार जनको रक्षाको लागि देख्ने बितिकै ॐ लेखी सेयर गर्नुहोस!
प्रकाशित मिति: बुधबार, पौष २९, २०७७ समय: ५:४७:११
ॐ नम शिवाय लेखी लाईक कमेण्ट सेर गरम त, एक मिनुट मा सुखद खबर आउने छ। परिवार जनको रक्षाको लागि देख्ने बितिकै ॐ लेखी सेयर अवोस्य गर्नुहोला।
पुरा पढी एक शेयर अवोस्य गर्नुहोला-
आज तपाईंले धेरै खिचलो र फरक विचारहरूको सामना गर्नुपर्ने हुन सक्छ जसले तपाईंले रिस उठ्ने र अप्ठ्यारो गर्नेछ। परिवारका सदस्यहरूसँग मतभेदमा विजयी भएर – तपाईं सजिलै आफ्नो लक्ष्य पूरा गर्नु हुनेछ। तपाईंको जीवनसाथीले पूरा दिन तपाईंको बारेमा सोच्छन्। आफ्नो घरमा आफ्नो मालिक र वरिष्ठहरूलाई निमन्त्रण गर्ने राम्रो दिन होइन।
आजको दिन तपाईंलाई कस्तो लाग्यो भन्ने कुरा अरूलाई बुझाउन उत्सुक नहुनुहोस्। तपाईंको जोडी प्रेमको परमानन्दले तपाईंलाई अचम्म दिने मुडमा छन्; उनलाई मद्दत गर्नुहोस्। जीवनलाई लिएर एउटा उदार मनोवृत्ति बनाउनुहोस्। आफ्नो बाँच्ने अवस्थालाई लिएर उजुरी गर्ने र दुखी हुने कुनै काम छैन। यो जीवनको सुगन्ध नष्ट गर्ने र शान्त जीवन बाँच्ने आशाको हत्या गर्ने नीच सोचाइ हो। परिवार समस्याग्रस्त हुन सक्छ। तपाईंको पारिवारिक जिम्मेवारीको लापरवाहीले उनीहरूको क्रोध निम्त्याउन सक्छ।
तपाईंले के के गर्नुपर्छ भनेर आफ्नो प्रेमीसँग भन्नुभयो भने गम्भीर समस्या हुनेछ। आफ्नो लक्ष्यमा लागिरहने राम्रो दिन। लक्ष्यहरूलाई हासिल गर्न आफुलाई निरन्तर अघि बढाउने काम गर्न आफ्नो शरीर ऊर्जा थप्नुहोस्। तपाईंले यस विषयमा आफ्नो मित्रको सहयोग लिन सक्नुहुन्छ। यसले तपाईंको हौसला बढाउनेछ र तपाईंका लक्ष्यहरू प्राप्त गर्न मद्दत गर्नेछ।
गलत सञ्चारले आज केही समस्या सिर्जना हुन सक्छ, तर तपाईंले यसलाई बसेर बातचीत गरेर समाधान गर्न सक्नु हुनेछ। तपाईंको बाल्य प्रकृति निस्किने छ र तपाईंमा चञ्चल मुड आउनेछ। आज तपाईंले घरमा अरूलाई अपमान गर्ने प्रयास गर्नु हुँदैन र आफ्नो परिवारको आवश्यकता अनुकूल हुनुपर्छ। आज प्रेममा आफ्नो विवेक शक्ति प्रयोग गर्नुहोस्। काममा परिवर्तन भएको राम्रो हुनका लागि हो। खाँचोमा परेकाहरूलाई मद्दत गर्ने तपाईंको क्षमताले आदर पाउनुहुनेछ। आज आफ्नो जीवनसाथीले तपाईंलाई एउटी परीले झै अतिरिक्त हेरचाह गर्नेछन्।
म जे लेखिरहेको हुन्छु, जे भनिरहेको हुन्छु त्यो सकभर मुलुकका हितमा नै होस् भनेर हो। यसमा नकारात्मकता वा सकारात्मकताको कुरा केही हैन। अधिकांश कुरामा तथ्य पस्कने प्रयास गर्छु, त्यसका आधारमा थप खोजून्, पुष्टि गरून्, वा सच्याउन् । विश्लेषण आआफ्नै होस्। विचार भन्दा बढी तथ्यले समस्या बुझ्ने गरिन्छ । आंकडाले विश्लेषण सहज हुन्छ । कसैप्रति द्वेष छैन, न राग छ । मुलुकमा लोकतन्त्रको मर्म स्थापित भैदिए हुन्थ्यो, कानुनको शासन भैदिए पुग्छ । दण्डहीनताप्रति शुन्यसहनशीलता भएन भने त्यो राज्य हुन सक्दैन । राजनीतिमा पैसाको खोलो बगाउने शासन नभैदिओस् । प्रशासनबाट नै जनताले सुखसुविधा पाउने हो, राजनीति त वातावरण र जनमतको आवरण मात्र हो ।यथार्थमा प्रशासन नै सरकार हो।
लेाकतन्त्र जबसम्म हाम्रा रक्त कणकणमा बग्दैन, तबसम्म लोकतन्त्रलाई सामूहिक भन्दा व्यक्तिगत र क्षणिक फाईदाका लागि दुरूपयोग गरेर आफ्नै भविष्यलाई नर्क बनाउदै जान्छौं । राजनीति कानुनले हैन, नैतिकता र जनमतले हाकिने हो । संविधान, ऐन, कानुन पल्टाउने त प्रशासनले हो, राजनीतिले हैन । राजनीति दिशा निर्देशक सुई हो, गलत दिशा देखाउने राजनीति राक्षेसनीति हो।
यदि तपाँई मोबाईल छेउमा राखेर सुत्नुहुन्छ भनेपनि तपाईको लागी ख’तरा पनि छेउमै हुन सक्छ । मोबाईल छेउमा राख्दा नोटीफिकेशन अन अफ ,र भाईब्रेशनका कारण निन्द्रा गडबड हुन्छ । निन्द्रा पुरा भएन भने हामीलाई काम गर्न कठीन पर्छ ।
आफ्नो इच्छा अनुसार छोरा वा छोरी जन्माउने ६ सुत्र के भन्छ अध्ययन
८.	सुत्ने बेला किन ब्रा खोलेर सुत्ने? नखोल्दा के हुन्छ ? हरेक महिलाले जान्नै पर्ने !
९.	आफ्नो फोक्सो ७२ घण्टामा आफैं यसरी सफा गर्नुहोस्, पढौं र जानकारीको लागी सेयर गरौं…